Melt On Skin - ikigai
Melt On Skin
Met on Skin
Hydrating Serum ပါတဲ့ Satin Finish BB Foundation က Coverage ကောင်းပြီးဝက်ခြံထွက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ Ingredient တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
ခီခီရဲ့ Melt on Skin က Make up with Serum Foundation ဖြစ်ပါတယ်
Melt on Skin Serum Foundation က လိမ်းရတာပေါ့ပါးပြီး အပြစ်အနာအဆာများကို ဖုန်းပေးနိုင်ပါတယ်??
Hydrating Serumမှာ အသားအရေပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် Ingredients? တွေ အများကြီးပါဝင်ပါတယ်
?ခီခီရဲ့? Melt On Skin?လေးရဲ့ ပုံမှန် makeup တွေနဲ့ မတူတဲ့ အားသာချက်တွေကတော့…?
– Melt On Skinဆိုတဲ့အတိုင်း လိမ်းလိုက်တာနဲ့အသားထဲ ချက်ချင်းစိမ့်ဝင်သွားတာကိုခံစားရစေပါတယ်?
– Make Up + Hydrating Serum ပေါင်းစပ်ပြီးထုတ်လုပ် ထားတာကြောင့် Daily Wear အတွက်သင့်တော်ပါတယ်
– Anti Acne ဆိုပေမယ့် Medium Coverage ရှိလို့တော်ရုံအမဲစက်၊ အမာရွတ်တွေ ဖုံးပေးနိုင်ပါတယ်?
– Hydrating Serum တွင် Anti Acne Ingredient များစွားပါဝင်လို့ ဝက်ခြံမထွက်အောင်လဲကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်
-Satin Finish Makeup Type ဖြစ်လို့ All Skin Type အသုံးပြုလို့ ရပါတယ် ရာသီဥတုတိုင်းအတွက် အဆင်ပြေတယ်✨✨✨ Natural Look မျက်နှာလေးက ဖုန်ဖုန်လေးနဲ့လှနေစေမှာပါ
– လိမ်းထားရင် ထူထူကြီးဖြစ်မနေဘဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါးဖြစ်ပြီး အရောင်ပြောင်းသွားတာမျိုးလုံး၀မရှိပဲ တစ်နေကုန်ခံပါတယ်။ Retouch လုံး၀မလိုပါဘူးနော်
–ရေစို ၊ ချွေးထွက်ခံတာကြောင့် Tissue နဲ့ မျက်နှာကိုသုတ်ရင်တောင် Tissue ပေါ်မှာ Makeup တွေပါလာတာမျိုး မရှိပါဘူး?
– ခီခီရဲ့? Melt On Skin? လေးက မျက်နှာ အဆီပြန်လာတာနဲ့အမျှအသားအရေလေးကပိုမိုဝင်းပလာစေပါတယ် ✨✨✨✨
?ခီခီရဲ့ ?Melt On Skin? တွင်ပါဝင်သောအဓိက Ingredients ရဲ့အကျိူးကျေးဇူးတွေကတော့…..
–နွယ်ချို(Licorice)? ပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေကို ဖြူဝင်းစေတယ် ၊ ယောင်ရမ်းမှု (Allergic )ကိုလျော့ချ
ပေးနိုင်တဲ့အပြင် နုပျိုစေဖို့ ဆဲလ်သေတွေကို အသစ်တဖန် မွေးဖွားပေးပါတယ် ??
-Niacinamide (Vitamin – B3?) ပါဝင်လို့ ချွေးပေါက်တွေ သိသိသာသာကျဉ်းစေပြီး အသားအရေကို ချောမွေ့စေပါတယ် ✨အသားအရေကျန်းမာအောင် Proteinဓာတ်ကိုအားဖြည့်ပေးပြီး? Collagen ထုတ်လုပ်မှုကိုလည်း ကူညီပေးလို့ အမဲစက်တွေသိသိသာသာ လျော့နည်းစေပါတယ်? ၊ အဆီပြန်ခြင်းကိုလည်း ထိန်းချုပ်ပေးလို့ ဝက်ခြံကို သက်သာစေပါတယ် ✨
-Organic Rose Water Extract? ပါဝင်လို့ အနံ့လေးက စိတ်ကို လန်းဆန်းစေပြီး Relax ဖြစ်စေတဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်??ရေဓါတ်ဖြည့်တင်းပေးလို့် အသားအရေကို စိုစိုလေးနဲ့ ကြည့်ကောင်းစေပါတယ် Sensitive Skin? ဖြစ်တာကိုလဲ လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်
-Aloe Vera Extract ☘️ပါဝင်လို့ နေလောင် ဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့ အသားအရေကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပြီး ဝက်ခြံထွက်တက်တဲ့ အသားအရေကို ပြန်လည် ကောင်းမွန်စေပါတယ် အရေးအကြောင်းတွေကို လျော့ချပေးပြီး အိုမင်းရင့်ရော်မှုမှလည်း ကာကွယ် ပေးပါတယ်???
-Tranexamic acid ပါဝင်လို့မျက်နှာမှာရှိတဲ့အပြစ်အနာအဆာအမဲစက်တွေကိုသက်သာလျော ့နည်းစေပြီးအသားအရေရောင်ယမ်းခြင်းတွေကိုလဲလျော့နည်းစေပါတယ်။အသားအရေ Brighening အတွက် ထိရောက် စွာ လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
?ခီခီရဲ့ ?Melt On Skin ?လေးရဲ့ Color တွေကတော့……
01-Oat Meal (ကွေကာအုတ်အရောင်)
02-Peanut Butter( မြေပဲနှစ်အရောင်)
03-Brown Sugar ( သကြားညိုအရောင်) ဆိုပြီး (၃) မျိုးရှိပါတယ်
?ခီခီရဲ့ Melt On Skin လေးရဲ့ အသုံးပြုပုံကတော့ ……
–ခီခီရဲ့? Melt On Skin? လေးက Hydrating Serum ပါတဲ့ makeup ဖြစ်ပါတယ် ။( ဗူးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ Hydrating Serum နဲ့ Makeup တွေက ကွဲနေတက်လို့ပါ )
ဒါကြောင့် မိတ်ကပ် နဲ့ တစ်သားတည်းဖြစ်အောင် ဘူးကို Shake ပြီးမှာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်?
–မျက်နှာပေါ်မှာ အစက်လေးတွေချပြီး လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ဖော့လေးတွေနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်
ပုတ်ပုတ် ….ပုတ်ပုတ် ပြီး အသားထဲစိမ့်ဝင်သွားတဲ့ထိ လိမ်းပေး ရပါမယ်??
ကိုယ့်ရဲ့ မျက်နှာမှာရှိတဲ့ အပြစ်အနာအဆာတွေအတွက် ခီခီရဲ့ ?Melt on Skin? လေးကို နှစ်ထပ်ထပ်ပြီး လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်
?ခီခီရဲ့ ?Melt On Skin? အသားအရေ အလိုက် အသုံးပြုပုံ …….
– အဆီပြန်လွန်းတဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်တွေက ခီခီရဲ့ ?Melt On Skin? ကိုလိမ်းပြီးတဲ့အခါ T-Zone လို နေရာမျိုးမှာ ပေါင်ဒါအမှုန့် (Loose Powder) မျိုးသုံးပေးသင့်ပါတယ် ။
ဒါဆိုရင် မိတ်ကပ်က တစ်နေကုန်ခံနေမှာ သေချာပါတယ်?
–ခြောက်သွေ့တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်တွေက ခီခီရဲ့ ?Melt On Skin? ကို မလိမ်းခင် ခီခီ Hydra Glow Toner (သို့မဟုတ်)Moisturizer ကို အရင်လိမ်းပေးသင့်ပါတယ် ။
ဒီလိုမှ ခီခီရဲ့?Melt On Skin? ကိုလိမ်းတဲ့အခါအသားအရေလေးက စိုပြေချောအိနေပြီး ပိုမိုလှပစေမှာပါ ✨?
–အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ခီခီရဲ့ ?Melt On Skin?ကိုအသူံးပြုပြီးတိုင်းအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ မိမိအသားအရေနဲ့ သင့်တော်တဲ့ Makeup Remover နဲ့ဖျက်ပြီး Cleanser လေးနဲ့ မျက်နှာသစ်ပေးပါနော် ?
တစ်ဗူးမှ 8500ks ပဲ ဆိုတော့ သုံးပျော်တယ်လေ